နေ့ဘက်တွင် ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြပြီး ညဘက် တွင် KTV မှာသွား ကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင် တွင် တစ်ည အိပ်လိုက်ရတဲ့ သံစဉ်မောင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / နေ့ဘက်တွင် ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြပြီး ညဘက် တွင် KTV မှာသွား ကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင် တွင် တစ်ည အိပ်လိုက်ရတဲ့ သံစဉ်မောင်
နေ့ဘက်တွင် ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြပြီး ညဘက် တွင် KTV မှာသွား ကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင် တွင် တစ်ည အိပ်လိုက်ရတဲ့ သံစဉ်မောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်နဲ့ သံစဉ်မောင် တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။စကားပြောကြမ်းတဲ့အတွက် ပရိသတ်​တွေ ဩချရတဲ့ အထိပါပဲနော်။ နောက်ပိုင်းမှာ နေဒွေးနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းLive လွှင့်ငို ပြတာကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်တော် ပြန်ဖြစ် လာပါတယ်နော်။
ဘေဘီမောင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေး တွင် ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည် အေးချမ်းပါစေဆိုပြီး ဘုရား၊ တရားတွေ ဆက်တိုက် လုပ်နေပြန်ပါပြီနော်။ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်ကလည်း သံစဉ်မောင် တစ်ယောက် နေ့ခင်းဘက်တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ညဘက်တွင် World Wide KTV မှာ သွားကဲလို့ အင်းစိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့ရတာပါနော်။
အခုထိလည်း နေ့ဘက်တွင် ဘုရားတရား လုပ်ပြပြီး ညဘက်တွင် ရှိသမျှ Bar တွေထိုင်ပြီး မြူးတူးပျော်ပါးနေတာပါနော်။ နောက်ထပ်ကြားသိရတာကတော့ တခြားဘဲနဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွင် နေဒွေးက မြင်တွေ့သွားတာကြောင့်ရိုက်နှက်တာကို နှိပ်စက်ပါတယ် ဆိုပြီး ညီအစ်မနှစ်ယောက် မျက်ရည်ချူ ပြသွားကြတာပါနော်။ သူတို့ ညီအစ်နှစ်ယောက် ကိုတော့ အကယ်ဒမီတစ်ယောက်တစ်ဆုဆီ ပေးသင့်နေပြီနော်….
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေဘဘီေမာင္နဲ႔ သံစဥ္ေမာင္ တို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ ကိုေတာ့ အားလုံးသိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။စကားေျပာၾကမ္းတဲ့အတြက္ ပရိသတ္​ေတြ ဩခ်ရတဲ့ အထိပါပဲေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနေဒြးႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းLive လႊင့္ငို ျပတာေၾကာင့္ ပရိသတ္​ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ျပန္ျဖစ္ လာပါတယ္ေနာ္။
ေဘဘီေမာင္တို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ဟာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး တြင္ ဟန္ေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ ေအးခ်မ္းပါေစဆိုၿပီး ဘုရား၊ တရားေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ေနျပန္ပါၿပီေနာ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းေလာက္ကလည္း သံစဥ္ေမာင္ တစ္ေယာက္ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ဟန္ေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ညဘက္တြင္ World Wide KTV မွာ သြားကဲလို႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရတာပါေနာ္။
အခုထိလည္း ေန႔ဘက္တြင္ ဘုရားတရား လုပ္ျပၿပီး ညဘက္တြင္ ရွိသမွ် Bar ေတြထိုင္ၿပီး ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးေနတာပါေနာ္။ ေနာက္ထပ္ၾကားသိရတာကေတာ့ တျခားဘဲနဲ႔အတူေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္ ေနေဒြးက ျမင္ေတြ႕သြားတာေၾကာင့္႐ိုက္ႏွက္တာကို ႏွိပ္စက္ပါတယ္ ဆိုၿပီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ မ်က္ရည္ခ်ဴ ျပသြားၾကတာပါေနာ္။ သူတို႔ ညီအစ္ႏွစ္ေယာက္ ကိုေတာ့ အကယ္ဒမီတစ္ေယာက္တစ္ဆုဆီ ေပးသင့္ေနၿပီေနာ္….
Previous post ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ လူတွေ ကိုလည်း အပြစ်မတင် ချင်တော့ ပါဘူး လို့ ဆိုလာ တဲ့ မေမဒီ
Next post ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ ပိုပို့ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ကနေ POST အသစ် တစ်ခုတက်တာကြောင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ